Momba anay | Zhejiang Yongkang Manangona fitaovana mitebiteby Co., Ltd.
Zhejiang Yongkang Manangona fitaovana mitebiteby Co., Ltd.dia natsangana tamin'ny taona 1990, miaraka amina renivohitra voasoratra 8 tapitrisa. Izahay dia mifantoka indrindra amin'ny refin'ny computing Price, ny lanjan'ny lanja sy ny fanisana, ny ambaratongam-pahefana elektronika, ny refin'ny gorodona, ny refin'ny vatana sy ny fandroana, ny refin'ny lakozia, ny lanjan'ny valizy elektronika sns.
Avy amin'ny famokarana kely hivoatra ho lasa orinasa mpamokatra fitaovana mavesatra mavesatra ankehitriny, manana ny velaran-tany 17000 metatra toradroa izahay, tsipika famokarana enina enina, 45 pcs ny famaritana mandeha ho azy sy ny famokarana fitaovana, ekipa QC, ekipa fampandrosoana ny vokatra ary fahafaha-mamokatra isan-taona 700000 unit, afaka manome fahafaham-po ny mpanjifa misy orinasa OEM. Tamin'ny taona 2008, ny orinasan-tsika dia nanoratra ny orinasany Import & Export. Ireo vokatra dia aondrana any Azia, Amerika, Eropa, Afrika, Aostralia, Nouvelle Zélande sns, ary manana laza tsara sy kalitaon'ny vokatra tsara amin'ny fahatokisan'ny mpanjifa sy ny fanamafisana.
Nandritra ny 20 taona mahery tamin'ny fampandrosoana dia tsy nivadika tamin'ny fitsipiky ny "Fahamendrehana, kalitao, serivisy, tombontsoa iraisana, andraikitra sy fankasitrahana isika." Mampanantena izahay: Ny vokatray dia toy ny olona, ​​ny anay dia toy ny vokatra, Marina! Marina! Rariny ary tsy mamitaka mihitsy! Izahay dia mikendry ny hiara-hiasa aminao handroso amin'ny ho avy mamiratra.